खुल्लामन्च: January 2009
अनिदो रात आँफै पल्टिदो रहेछ, एक्लो मन सिएर
बल गर्छु निदाउन बलजफ्ती, मताउने प्याला पिएर !
जुन ताराहरु पनि टह टह हेरिरहने, मलाई ताकी
सङी सम्झी सम्बोधन गर्छु आफ्नै हात दिएर !!
यता रित्तो, उता भित्तो, नभेटिने केही कतै छाम्दा
रित्तो गिलास हेर्दैमा गयो, आँखाको परेला खिएर !!!
काट्नु त पर्ने नै रहेछ रात, नसकी आँफै पनी मरी यहाँ
बिहानिमै कतै भौतरिन त छदैछ, दु:खका यि हात सिएर !!!
उमा सिंहको हत्या अनी ईन्द्र लोहनिको असामयिक निधनले आँखाहरु ओभाउन नपाउदै काठमाण्डौको फोहोरले सबैको नाकमा ढुसी लाग्न थालेको छ । नेताहरु त पजेरोमा हुइकिन्छन, साहु महाजनहरु कारमा सवार त राजा महाराजाहरु दरवारमा । फोहोर गन्हाउने त सडकमा लडेका बेसहरा खाते बालकहरु र जिबिकोपार्जनको लागि रात दिन खट्ने हाम्रा दाजुभाइ-दिदी बहिनिहरुलाई न हो । राजा महाराजाका नाम फेर्न मात्रै ब्यस्त छन, हामीले चुनेर पठाएका "गणतान्त्रिक राजाहरु" । गोर्खाली बिरताको ईतिहास मेट्न शायदै कस्सैले सक्ला तर एकिकरणका मालिकको नाम फेरियो । गणतन्त्रको कसम खाएर छातीमा हात राखी भन्नु सक्छौ हामी कि पृथ्वीनारायणको नेपालमा कुनै योगदान थिएन ? यसरी परिबर्तन हुँदै छ नेपाल, नयाँ नेपालको बाटोतिर । प्रचन्डलाई दुई लाख मुल्य पर्ने पलङ फेर्न मन लाग्यो । एकाएक त्यो फेरियो । आज त्रिभुबन विश्वबिद्धालय बन्द छ । त्यसको चापी फेरिएन न त पुस्तकालयमा कुनै पुस्तक फेरियो । महाजनहरुका इच्छा केहीबेरमै परिवर्तन हुन्छ तर काठमाडौंलिहरुले सित्तैमा पाइने स्वच्छ सास पेर्ने सपना कहिले फेरिए होला ? कर नतिर्ने ब्यापारीहरुका बिज्ञापनका होर्डिङ बोर्डहरु दिनदिनै फेरिन्छन तर सरकार तिनिहरुसँग कर खिचेर फोहोर थन्काउने भाडोहरु किन किन्न सक्दैन ? हामीले तिरेका करबाट सुनहरु भित्रिन्छन, नेताहरुको लागि । हाम्रा भुँडीमा माड लाग्दैनन नेताहरुलाई बनारसबाट निर्यात गरिएको रसबरी खानु पर्छ । यसरी नेपाली जनताका चाहहरु दिनानुदिन तुशारापात हुँदैछन त नेताका नातेदार्हरुलाई सधैं दशै । महाकाली प्वाल परेको छ त्यसैले देशले लोड्सेडिङमा दिन गुजार्नु परेको छ । मेलम्ची पनि भारततिरै फर्किएर बगेको छ त्यसैले काठमाडौं प्यासमै रमाउनु परेको छ । सगरमाथाको उचाइ घटेको छ अनी बुद्द भारतमै जन्मेका छन त्यसैले हाम्रा ईतिहासअहरु धुजा धुजा भएका छन । नेपालको खाता पाता साउथ ब्लकको दराजमा थन्किएको छ । तेही हिसाब किताब पल्टाउदै भारतीयहरुले दिने निर्देशनले देशका नेताहरु चलेका छन भने बिकासको आशामा रहेका हाम्रा मनहरुमा हुस्सु लागेर गलेको छ ।
राणाहरुले चुस्न मात्र थालेका थिए आमालाई । पन्चेहरुले आन्द्रा-आन्द्रा लुछे । त्यसपछिका शाहहरुले फोक्सो सम्म लुछ्न सके भने बर्तमानका श्रीहरुले मुटु पनि लुछेर भ्याइसके । अब त बाँकी के नै पो छ र लुछ्नलाई ? हाम्रा हजुरबाहरुले तीन तीन चोटि प्रतिनिधि बनाएर पठाए, आमालाई लुछ्न बाट जोगाउन । तिनिहरु पनि त्यस्तै रहेछन । बानी लागेकाहरुलाई कसरी छुटाउन सकिदो रहेछ र ? फेरी महासङ्राम पछीको खेलबाट हामीहरुले नयाँ जबानहरु पठायौ - आमाको घर, सन्सदमा । कतिका त हामीले जमानत पनि जफत गर्यौ । तर तिनका बाउ र मामाहरुले तिनलाई लुछ्ने नियुक्ती दिलाए । तिनै जमानत जफतिहरुकै बोलवाला छ अहिले नेपालमा । क्सैको जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन न त कसैको भरोसा । सत्ताको लागि दाजु काटिएको मुलुकमा कसको भरोसा ? भत्ताको लागी श्रीमतिहरु बेचिने मुलुकमा कसको विश्वाश ? निती कहिल्यै प्रधान भएन मुलुकमा । नेताका बोलिहरु संबिधानका धाराहरु ठहरिए । कसैले राम्रो कुरो बोलेको नपच्ने, भोलिपल्टै देश कब्जा गर्ने धम्की सुनिन पाइने । राज्यको लागि सुरक्षा दिने सेनाको टकरावको लागि अरु पनि सेना ? सबै जातिका आफ्ना आफ्ना सेना ? जहाँ कसैको सुरक्षा छैन त्यहा सेनै सेना । अचम्म छ, खेतमा पानी लगाउन गएको भाई फर्केने कुनै भरोशा छैन । साल काट्न बन गएकी बहिनी बलत्कार हुने घटना सामान्य भैसके । तर नेपालमा जसले राजनीति गरे, उनिहरु मात्रै सुरछित । तिनका भाई क्याप्टेन, बहिनी हाकिम, श्रीमती सभासद, सालो महाप्रबन्धक अनी साली राजदुत । कपुरी क नजान्ने साँहिलाहरु निती निर्माता । जङलताकाका सहयोगिहरु सबै रेडियो नेपाल र टेलिभिजनका कर्मचारी । यसरी नै चलाएका छन, श्रीहरुले नयाँ नेपाल । हामीहरु तथास्तु भन्दा अरु केही भन्न सक्ने वाला छैनौ । फेरी भोली गिडिएला भन्ने डर ।
आज जनवरी १९ । मार्टिन लुथरलाई सम्झने दिन । यतिबेला विश्व नतमतस्क छ, समानताको लडेको उनको लडाईं सम्झदै । पि. एच.डि. को प्रमाण पत्रलाई दराजमा थन्काएर सत्यको राजनीति गरे उनले । उनको बारेमा स्वस्थानी जस्ता धेरै पवित्र लेखानहरु पढ्न सक्छौ हामीले, किनकी दुई हरफमा उनका बलिदानहरु यहाँ उल्लेख गरेर सकिदैन । हामी मात्र यती भन्न सक्छौ कि जनताको मुक्तिको लडाईं लडे उनले । रेलमा काली केटीलाई गोराले गरेको दुर्व्यबहार देखेर मुक्तिको बिगुल फुके उनले । तर तीन करोड हामी नेपाली बेचिएको नाटक टुलुटुलु हेरिरहेका छन, मुक्ती भनाउदो लडाईं लडेको धमास लगाउने - हाम्रा प्रचन्डहरु । कसैको गोलिले जिन्दगी हावामा उडाएपनी मार्तिन लुथरको मुक्तिको लडाईंको सास फेर्छन अमेरिकिहरु । सत्य, समानता र निस्वार्थ उनका निती थिए, उनी लडे सफल भए । उनी मारिए, मरे तर पनि बाचेका छन । यि नेताहरुले हामीलाई लोप्राएपनी हाम्रा सन्ततिहरुले मुक्तिको स्वच्छ सास फेर्न सकुन । काठमाडौं नगनाओस । जय डा. लुथर ! जय मुक्ती !! जय नेपाल !!!
Posted by Unknown Labels: अनुभुती
खबर सुन्दा सार्है दु:ख लाग्यो । चाकरिबाजलाई पत्रकारिताको आदर्श मान्ने "कथित पत्रकार" हरुको बिगबिगी बढीराखेको बर्तमान अवस्थामा ईन्द्र लोहनी जस्ता होनहार प्रस्तोताको देहबसानले नेपाल आमाले उमा सिंह पछी अर्को सपुत गुमाएकी छन । निर्डर, निर्भिक अनी स्पस्ट वक्ता स्वर्गिय "बहसकर्ता" लोहनिको चीर शान्तिको कामनाका साथमा दुई थोपा आशु सहित शोक सन्तप्त परिवारप्रती हार्दिक समबेदना !!! जय होस् !!!
हिजो यिनिहरु सबै काशिका जोगीले जसरी पहेलो बस्त्र पहिरिएर जनता सँग भिख माग्थे, आज जनतालाई नाङै बनाएर लुट्न सिकाएका छन । सिंह दरवार अगाडि महिलाले नाङै बिकासको भिख माग्दा पनि यिनका घैटामा घाम लागेनन । आज जनता सबै जोगी भएका छन । सबै जोगी भएपछी भिख दिने को ? को सँग माग्ने भिख ? त्यसैले परिवार पाल्न नसकेर राम कृष्णहरु बिख पीइ आत्महत्या गर्न वाध्य भएका छन । हामी जनता चाँही लाटो कोसेरो जसरी राम कृष्णको परिवार बिचल्ली भए जसरी भोको पेट र बढेका नङ्रा देखाएर बस्न वाध्य भएका छौ । अब यहाँ सम्झन मन लाग्छ, हाम्रा पुर्खाले स्वतन्त्रताको लागि लडेका लडाईंका के अर्थ ? सुक्रराजहरु फासिमा झुन्डिएर छातीमा गोली थापेको के अर्थ ? जीवनहरु लोकतन्त्रको लागि लडेर अपाङ्ग भएको के अर्थ ? पुर्खाको बलिदानिको नाममा बनेको ट्रस्ट पञ्चेहरुको मागी खाने भाडो भएको छ, सुक्रराजहरुका नाममा बनेका स्कुलहरुमा केबल समानती र शोषक-शासक हरुका बचेँरा खेल्ने पाठशाला भएको छ भने जीवनभर अपाङ्ग बनेका जीवनहरुको नाममा ति शासकका भाई भतिजाहरुले मोटरसाईकल र महङा मोबाईल सेटहरु बोक्ने माध्यम बनएका छन । अतएब: हामीले के पायौ त आखिर ? जनताको सहि बिचार छापिने कुनै पत्रीका छैन देशमा । सबैका आवाजहरु धम्किले पेलिएका छन, निमिट्यान्न भएका छन । स्वतन्त्रताको कसम खाइ खुलेका संचार माध्यामहरु कि त कांग्रेसी मुखपत्र भएका छन, कि त तिनिहरु एमालेको महाधिबेशनको घोषणापत्र बनेर बासिरहेका छन कि त भने याइ. सि. एल . का आतंकको गुणगान गाउँ मै ब्यस्त छन । १३० सालको राणा शासनले नदेखाएको बर्बर आतंक आज हामी खेप्न वाध्य छौ । कोही बोल्यो कि भोलिपल्टै अपहरण अनी सदा भरी बनमारा घारिको बास - खुकुरिको छप्काइले । बल्ल बुझियो, यही रहेछ, प्रजातन्त्र । यती दिन आएको रहेछ लोकतन्त्र । धन्य शाहहरु, कोइराला र अधिकारीहरु अनी बर्तमान दाहालहरु ।
Posted by Unknown Labels: आवाज
यो पनि !
करिब चार सय प्रहरीलाई विदेश पठाउने सिटमा आफ्नै पार्टीबाट १ हजार ९ सय जनाको नाम सिफारिस भएर आएको छ ।
वामदेव गौतमगृहमन्त्री एवम् नेता, नेकपा एमाले
साभार: नेपाल साप्ताहिक
वाल्ल परेर टोलाउनु सिबाये के छ र ?
गर्नेले नहुने काम गरे पछी ।
मुटुमै छुरा रोपे पनि सहनै पर्ने
नामर्द भई आँफै मरे पछी ।
मन बिसाउला भन्दै जुनी बित्यो
गर्न केही नहुने कोही पर सरे पछी ।
खोज्दा हराएको चीज कहाँ पाइने
त्यही चिज कसैले हरे पछी ।
बस्न नपाईने भो अब, अनेक नाममा
कसैले खाली ठाउँ भरे पछी ।
डर पो लाग्दो रहेछ, पाइला चाल्न
अनाहकमा पिर्लिक्क आँखा तरे पछी ।
सतिले सरापेको देशमा आज कती संकट छ, भाचिएका तारबारहरु, भत्किएका पुलहरु अनी टुटे-फुटेका टावरहरु जोडीने कुरो त कहाँ हो कहाँ झनै अनेक समुहको नाममा फेरी तोडिने क्रमहरु जारी छ भन्ने कुरो त सर्बबिदितै छ । हाम्रा बा-आमाका कुटो कोदालोहरु फेरिएनन् । राजनीति गर्नेका घरहरुमा नोकर चाकर फेरिए । हाम्रा भाई भतिजाहरु तिनिहरुका ताली पड्काउने कार्यकर्ता भए । ति राजनीति गर्नेहरुका बन्दुक खेलाउने खेताला भए । मेजर साहेबका घर बनाउने ज्यामी भए । अनी आज तिनैका नोकर चाकर भएर गुजारा चलाई रहेका छन, हाम्रा भाई भतिजाहरु । चेलिबेटिहरु ति राजनीति गर्नेहरुका गुप्तचर थिए, नेताहरुलाई क्रान्तिमा सघाए र आज मुम्बईको कोठी उपहार पाए । नेताका आफन्तहरु पजेरो चढे, मन्त्राणी भए, सभासद् भएका छन । महँगो स्कुलको बिद्यार्थी र ठुलो प्रोजेक्टको निर्देशक भएका छन । तिनका आफन्तहरुले नै जता ततै नियुक्ती पाए तर मेरा बा आमा ले के पाए ? एक सय पचास लिटर मुल्यको मटितेल, छुन नसकिने अनी सडेको चामल, सोर्ह घण्टा लोड्सेडिङ अनी सधैं चक्काजामहरु ।
कती कुरा गर्ने बिसमताका ? नभएका बिकासका, भत्किएका तिनै पुलहरुका । अब त मनै भाच्चिएको छ , कुनै सरकारको योजनाले पनि नजोडीने गरी भचिएको छ नेपाली जनताको मन । ००७ सालमा एक हजार सहिद भएका थिए होलान, ०१७ सालमा त्यसको दोब्बर मरे होलान । ०४६ सालमा कती मरे सबैलाई थाहा छ, त्यसपछी मरे लगभग १५ हजार । "नया" सरकार आएपछी मरिसके रे अन्दाजी २५० निर्दोश । अझै अपहरण गरी घाटि रेटिएका सात बर्शका सुमनहरुका लेखा जोखा त कता हो कता ! मोबाईल सेटको पैसाको निहुमा छप्किएका १९ बर्शे भाईहरुको कथा र चन्दा नदिएको निहुमा अनेक समुहको नाममा तातो गोली खाने र गिडिनेहरुको कथा यहाँ उल्लेख गरेर के साध्य लाग्ला र ? शान्ती, बिकास र सु-ब्यबस्थाको प्राप्तिको लागि जो गिडिए पनि आज देशले केही पाएन । भोलीको त कुरै छाडीदिउ । जलस्रोतको सबैभन्दा धनी देशमा बिजुली कुनै चराको नाम भएको छ । सगरमाथा मात्रै पग्लिएर बगेको पानीले सारा नेपाली पुग्छ, तर पिउने पानी कन्दमुल भएको छ । बुद्ध जन्मेको देश, इराक, सुडान र हैटी भन्दा अली शान्त भनेर चिनिएको छ । १० हजार गोर्खालिले १ लाख सेनालाई खुकुरी भरमा युद्ध जितेको कथा नेपालीले होइन, बेलायतिले जितेको ईतिहास भएको छ । खै कता गयो ? हाम्रो स्वाभिमान, बिरता अनी ईतिहास ? सतिले होइन हामीलाई शहिदले पनि धिक्कार्ने छ ।
बुद्ध त भारतमा जन्मिएको हो भन्ने भैसके हाम्रा नेताहरु !!! तिनिहरुले महाकाली नबेचेको भए पुग्दैनथ्यो बिजुली ? तिनका छोराहरुको हातमा हिजो बन्दुक र आज ल्यापटप । हिजो पोखरामा जहाज उडाउनेहरु आउने बर्ष बाबुआमालाई खेतमा हलो जोत्दै गरेको बिलौना पढ्न पाइने छ । लाग्छ, बिमान बनाउने ति हरुमा अहिले बल्पेन पनि छ कि छैन । अनी हेर्दा हेर्दै पशुपती मन्दिर जलेको देखिरहेछ, यो आँखा । धिक्कार होस् । गर्न त के नै सकिन्छ र तिनै जलेका नाङे पशुपती बाबाको नाम लिनु बाहेक ? हिजो हामी नैबेद्ध लिएर जान्थ्यौ भने आज खुकुरी र भला लिएर पूजारी काट्न गएका छन भाई हरु । जनताको भेटी खाएर मोटाएको पूजारीलाई कस्ले छुन सक्छ ? खुकुरी खाने त तिनै ढकाल, राइ, घिमिरे, श्रेष्ठ अनी भण्डारी हरु न हुन । हिजो अरब र खरब पारी आ-आफ्नो महल ठडाउने "राजनैतीक पूजारी" हरु भकाभक चोख्खिएका छन, तिनिहरु प्रती तेर्सिनु पर्ने हात पशुपती तिर लागेको छ, खोइ किन हो ! अब छिट्टै स्वयम्भु तिर कसैले आगो झोसेको देखिने छ, सुनिने छ । राम्रो कुरो केही बाँकी हुनेछैनन अब हाम्रो नेपालमा । भारतको सल्लाहमा शासन, चाइनाको सल्लाहमा रासन अनी अमेरिकाको सल्लाहमा नेपाल बेचिएको कथा पढ्न पाइनेछ । दुई चार अक्षर पढेका हामीले त्यसभन्दा बढी अरु के आश गर्नु ? अब छिट्टै पशुपतिमा अर्को माघे जात्रा लाग्ला, अनी बिकेन्द्रिकरण भने जस्तै त्यो जात्रा स्वयम्भु, गोरखकाली अनी शोभाभगवती हुँदै मुक्तिनाथ तिर लाग्ने छन । जात्रा हेर्न आउने भारती, चाइनिज र अमेरिकन भक्तालुहरुले जात्रामा नाङ्लो र डोको किनेसरी हामीलाई किन्ने छन । सुपथ मुल्यको लागि बार्गेनिङ गर्दै जात्राको मालिकसँग नेपालको भाई घटीघटाऊ हुनेछ र अन्तमा दुबैको सहमती पस्चात नेपाल बेचिने छ अनी हामी सारा नेपालीको सपना साकार हुने छ । पशुपतिले हामीलाई कल्याण गर्ने कुरो त छदैछ । अस्तु !gokulvivas@gmail.com